बजारभरि पाकेका आँप बाट कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन ? - समय-समाचार
बजारभरि पाकेका आँप बाट कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन ?
९ असार २०७७, मंगलवार ०५:४६
विराटनगर । असार दोस्रो साता लागिसकेको छ । तर, सुनसरीको इटहरी बजारकी सुनीता मण्डलको आँप पसलमा विगतजस्तो ग्राहकको भिड छैन । विगतमा असार पहिलो सातादेखि नै आँप बेच्न भ्याइ–नभ्याई हुन्थ्यो तर योपटक बजारको अवस्था उल्टो छ ।
“पहिले गुलिया र ग्राहकको रोजाइका आँप पाइन मस्किल हुन्थ्यो,” विगत सम्झँदै सुनीता भन्छिन्, “योपटक आँप छ तर खरिद गर्ने ग्राहकै छैनन् ।” उनले कोरोना रोगको डरले धेरै मानिस बजार निस्कने क्रम घटेको र फलफूलबाट समेत रोग सर्ने हो कि भनेर उपभोक्ताले नकिनेको गुनासो गरिन् । इटहरी बजारको ट्याङ्ग्रा खोला पुलनजिकै उनीजस्ता आँप व्यापारी दिनभर ग्राहक कुरेर बस्छन् तर औसत पनि व्यापार हुँदैन । उनीहरू हरेक साँझ खिन्न हुँदै घर फर्कन्छन् ।
इटहरी २ की नानु निरौलाले अहिले कोरोनाको कारण बिक्री गर्ने बिक्रेताको स्वास्थ्य अवस्था के छ भन्ने हेरेर मात्र जानकारी नहुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “कोरोना संक्रमणको डर त छँदै छ । फेरि फलफूलबाट कोरोना सर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?” विश्व स्वास्थ्य संगठन र चिकित्सकहरूले पनि ‘फलफूल र सागसब्जीबाट कोरोना सरेको उदाहरण फेला नपरेको’ दाबी गरिरहँदा नानुजस्ता धेरै नेपाली उपभोक्ताले कोरोनाको कारण सकेसम्म बाहिरी खानेकुरा किनेर उपभोग गर्न छाडेको पाइएको छ ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको गुद्री आँप खरिद–बिक्रीको लागि प्रमुख बजार हो । तर, यहाँ पनि योपटकको अवस्था विगतजस्तो छैन । थोकका थोक बिक्री हुने बजारमा आँपको माग घटेको छ । कोरोना महामारीले बजारसम्म पुग्ने ग्राहककै संख्या घटेकाले पनि ‘भनेजस्तो बिक्री हुन नसकेको’ व्यापारीको भनाइ छ ।
थोक बिक्रेता नागेन्द्र दास कोरोनाको त्रासका कारण फलफूल व्यापारै प्रभावित बनेको बताउँदै भन्छन्, “उपभोक्तामा फलफूलबाट पनि कोरोना सर्ने हो कि भन्ने एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ । विगतजस्तो खुलेर उपभोक्ताले मौसमी फलफूल खरिद गर्न डराइरहेका छन् ।” उनले विराटनगरमा प्रदेश १ को सप्तरी र सिरहासहितका क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा आँप आयात हुने गरेकामा योपटक कमी आएको बताएका छन् । सप्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाहीसहितका जिल्ला आँप उत्पादनका लागि प्रदेश १ का प्रमुख क्षेत्र मानिन्छन् ।
व्यापारी दासका अनुसार योपटक व्यवसायीले भारतबाट आँप मगाएका छैनन् बरु स्थानीय उत्पादनमै भर परेका छन् । लकडाउन, सीमामा सिल र यातायातको सहज पहुँच अभावले आयात गरिएको आँप कुहिने डर छ । दासले भने, “अहिले लकडाउन खुकुलो भएपछि प्रदेश २ का किसानले फटाफट आँप निकालिरहेका छन् तर भनेजस्तो मूल्य पाएका छैनन् । कुहिने, बिग्रने र बिक्री नहुने समस्याले हामीलाई ठूलो घाटा भएको छ ।”
गुद्री बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पशुपति भगत कोरोनाको कारण मानिसहरूमा फलफूल र सागसब्जीको विषयमा समेत अन्योल रहेको बताउँदै भन्छन्, “बिक्री त आधा मात्र भइरहेको छ । उपभोक्ताहरू बजारसम्म आएर खरिद गर्ने अवस्था सहज भइनसकेकाले फलफूल व्यापामा असर पुगेको छ ।” नेपालमा भारतबाट समेत ठूलो परिमाणमा भारतीय आँप आयात हुने गरेको भगत बताउँछन् ।
व्यापारीका अनुसार विराटनगरको बजारमा स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने मालदह, कलकत्तिया, बम्बै, सुर्जापुरी, कृष्णभोगलगायत आँप बढी माग हुन्छ । असहज परिस्थितिका कारण अहिले बजारमा स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको आँपसमेत आउन सकेको छैन । कतिपय व्यापारीले ठेलामा राखेर टोलटोलसम्म आँप बिक्री गर्न पु¥याउने गर्छन् । तर, अपेक्षित व्यापार भने छैन । विराटनगर ७ मा भेटिएका आँप व्यापारी देवेश साहले भने, “आँप खान मानिसहरू डराएको जस्तो महसुस हुन्छ । दैनिक एक ठेला आँप बिक्री गर्न पनि मुस्किल छ ।”